Nhọrọ nke akwụkwọ akụkọ adị adị
Nyocha akwụkwọ akụkọ ihe mere eme
Ink ọmịiko, nke Patrick Modiano dere
Na ụgwọ ya na-enweghị ngwụcha na narị afọ nke XNUMX. Oge jupụtara na nnukwu akụkọ ka anyị na-apụ n'oge, Modiano na-eduga anyị n'ime nkata na-emeghachi echiche ahụ na-enweghị isi nke ephemeral. N'ime echiche nke enwere ike ịchọta anyị nwere ike, ma ọ bụ…
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Juan Carlos Onetti dere
Juan Carlos Onetti na -adịghị ere ọkụ, ya na Mario Benedetti na Eduardo Galeano, mejupụtara mmeri akwụkwọ ọgụgụ site na Uruguay ha ruo Olympus nke akwụkwọ ozi n'asụsụ Spanish. N'ihi na n'etiti ha atọ ha na -ekpuchi ihe niile, ụdị ọ bụla na prose, amaokwu ma ọ bụ na tebụl. Agbanyeghị na onye ọ bụla na -enye nke ahụ ...
N'oge okpomọkụ, nke Karl Ove Knausgård dere
Akụkọ nke ndụ n'ime mgbanwe mgbanwe ya na cyclical nke oge na-egosi ọnụ ụzọ na ọpụpụ dị egwu nke ọnọdụ ọ bụla. N'oge gara aga, ịmụ nwa n'oge oyi bụ ihe ịma aka maka nlanarị. Taa, ọ bụchaghị akụkọ ifo pụtara na, nyere mbọ Karl Ove Knausgard ...
Maka onye na -eche m ka m nọ ọdụ n'ọchịchịrị, nke Antonio Lobo Antunes dere
Nchefu nwere nri nke ichefu ọbụna ntụgharị uche nke onwe ya dị ka usoro nchekwa, ebe mmadụ na -ekwupụta ụdị sololoies simulated dị ka echiche a na -ebuga n'echiche anyị. Nke ahụ bụ nkọwa kacha sie ike tupu anyị elee anya. Ọ nwere ike, na ...
Aga m anọ naanị m na enweghị oriri, nke Sara Barquinero dere
Ọ bụ eziokwu na ọ na -esiri ike ịchọta olu ọhụrụ na -ekwu maka ịhụnanya gbanyere mkpọrọgwụ na ike, na nkà ihe ọmụma, site na mmetụ akpụkpọ ahụ ma ọ bụ ọbụna site na orgasm. Na okwu ahụ bụ ihe ịma aka akụkọ ebe onye edemede ma ọ bụ onye edemede nọ n'ọrụ nwere ike igosipụta, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ...
Ezinụlọ Martin, nke David Foenkinos dere
Dịka ọ na-eme onwe ya ka ọ bụrụ akụkọ mgbe ochie, anyị amaralarị na David Foenkinos anaghị abanye n'omume ma ọ bụ mmekọrịta ezinụlọ na-achọ ihe nzuzo ma ọ bụ akụkụ gbara ọchịchịrị. N'ihi na onye edemede ama ama ama ama ama ama ama na France bụ karịa dọkịta na-awa ahụ nke mkpụrụedemede dị n'ụdị na ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Emil Cioran dere
Onweghi onye na -eche ihe na -adịghị mma nke ruru 84, dị ka ọ dị na Cioran. M na -ekwu nke a n'ihi mkpebi siri ike ịkọwapụta onye edemede a dị ka onye na -agụ akwụkwọ na -agụghị akwụkwọ nke enweghị ike na egwu maka ndụ mejupụtara n'ụdị ya na ihe mejupụtara ya na akụkọ yiri ikpe nke ndụ. ...
Ndụ mgbe ụfọdụ, nke Juan José Millás dere
Na Juan José Millás achọpụtala nka site n'aha akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla. N'oge a, "Ndụ mgbe ụfọdụ" yiri ka ọ na -ezo aka na nkewa nke oge anyị, na mgbanwe mgbanwe dị n'etiti obi ụtọ na iru uju, na ncheta ndị mejupụtara ihe nkiri ahụ anyị nwere ike ...